Training on “How To apply ODK Platform on MED” | ALARM Myanmar
မြန်မာ့ ပတ်ဝန်းကျင် ရေးရာ သတင်းဆုံရပ် (Myanmar Environmental Dashboard-MED)ဆိုင်ရာ Open Data Kit-ODK အသုံးပြုနည်းသင်တန်း (၁၇.၁၁.၂၀၂၀)
အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ/ကွန်ယက်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ အနေဖြင့်၎င်းတို့ ဒေသတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည့် စီမံကိန်းများ၊ သယံဇာတဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများကို ထိထိရောက်ရောက် စောင့်ကြည့် လေ့လာကာကွယ် နိုင်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဖြန့်ဝေမှုကို ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် အတွက် JPF အဖွဲ့၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် စိမ်းလန်းအမိမြေအသင်းသည် မြန်မာ့ ပတ်ဝန်းကျင် ရေးရာ သတင်းဆုံရပ် (Myanmar Environmental Dashboard-MED)ဆိုင်ရာ Open Data Kit-ODK အသုံးပြုနည်း သင်တန်း ကို ၁၇.၁၁.၂၀၂၀ တွင် Zoom application ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Myanmar Environmental Dashboard (MED) မြန်မာပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသတင်းဆုံရပ် ဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သတင်းအကြောင်းအရာ အချက်အလက်များကို စနစ်တကျ စုစည်းထားရှိဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ကြားခံ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ MED ကို ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာရပ်များ၊ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုစီမံကိန်းများ၊ ၎င်းတို့၏ နောက်ဆက်တွဲ ရေ၊ လေ၊ မြေ၊ သစ်တောသစ်ပင်၊ ဇီဝထုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အရည် အသွေး စသည်တို့ပေါ်တွင်ထိခိုက်မှုများ၊ ဒေသခံတို့ရဲ့ လူမှုစီးပွား ဘဝအပေါ်တွင်သက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်တိုင်ပြန်ကြား ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများကိုစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်၍ အများပြည်သူ ပိုမိုသိရှိနိုင်ရေး နှင့် တာဝန်ရှိသူများ မှလိုအပ်သည့်အရေးယူတုန့်ပြန် ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် စိမ်းလန်းအမိမြေအသင်းမှ JPF ၏ ငွေကြေးပံ့ပိုးမှု၊ နည်းပညာရှင်များ၏ အထောက်အကူတို့နှင့်အတူ ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။
Open Data Kit-ODK သည် Mobile information Platform တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း ကိုအသုံးပြုပြီး ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အရပ်ဘက် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း ကွန်ယက်များမှ စိမ်းလန်းအမိမြေ၏ Myanmnar Environmental Dashboard (MED) ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်သတင်းပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်တန်းတွင် ပထမဦးစားပေးအနေဖြင့် ဖိတ်ကြားထားသည့် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကယား ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် စိမ်းလန်းအမိမြေအသင်းမှ ပံ့ပိုးကူညီ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ကွန်ယက် (၈) ဖွဲ့မှ လက်တွေ့ မြေပြင်တွင် သတင်းယူပေးပို့မည့် ကွင်းတာဝန်ခံများတက်ရောက်ပါဝင်ခဲ့သည်။ စိမ်းလန်းအမိမြေမှ MED နှင့် Open Data Kit-ODK ပလက်ဖောင်း ကို စတင်ပြုလုပ်သူ ဦးလွင်မောင်မောင်ဆွေ၊ ဦးဖုန်းပြည့်ထွန်း၊ ဦးသီဟထွန်းနှင့် ဒေါ်ခေမာအေးမွန်တို့မှ သင်တန်းနည်းပြအဖြစ်ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ MED မိတ်ဆက် နှင့် Open Data Kit-ODK အသုံးပြုပုံကို အဓိကထားဆွေးနွေးသွားခဲ့သည်။
Open Data Kit-ODK ကို သတင်းပေးပို့မည့် အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကွင်းတာဝန်ခံများမှ ကောင်းစွာကျွမ်းဝင်သိရှိ၊ လက်တွေ့အသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ကာ ယခု သင်တန်းကို ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ ပါဝင်သတင်းပို့ပေးခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်သည့် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးပါဝင်သော ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သတင်းဆုံရပ်တစ်ခု ဖြစ်လာကာ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ပြဿနာများကို စုပေါင်းဖြေရှင်းသည့် ယန္တရားတစ်ခု ဖော်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သင်တန်းကို ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်၊ သင်တန်းဆရာ ဉီးဖုန်းပြည့်ထွန်းထံမှ သိရသည်။
ယခုသင်တန်းသားများမှ တစ်ဆင့် နောင်တွင် အခြား ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကိုလည်း ယခုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်။
MED တွင် သင်အသုံးပြုနိုင်မည့် အရာများ။
1. Real Time Map ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လတ်တလော ဖြစ်ပွားနေသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းပျက်စီးမှုများကို ၂၄ နာရီ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
2. သဘာပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းပျက်စီးမှုများ ကို SECTOR အလိုက်ခွဲ၍ အကြောင်းအရင်း၊ ဓါတ်ပုံနေရာ အထောက်အထားနှင့် တကွ ရှင်းလင်း တင်ပြထားခြင်း။
3. မိမိ မျက်စိရှေ့တွင် တွေကြုံနေသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းစေသော လုပ်ရပ်များကို ချက်ချင်း မိမိကိုယ်တိုင်ပင် သတင်းပေးပို့နိုင်ခြင်း။